युवती भर्जिन हो होइन भनेर कसरी थाहा पाउन सकिन्छ ? « Deshko News
युवती भर्जिन हो होइन भनेर कसरी थाहा पाउन सकिन्छ ?
माथि भनिएजस्तै सबैभन्दा केन्द्रमा रहेको परीक्षण केटीमा योनिच्छद छ कि छैन लाई नै मानिन्छ । योनि महिलाको नली आकारको प्रजनन अंग हो र बाहिरवाट देखिने प्वाललाई योनिद्वार भनिन्छ । यही योनिद्वारको ठीक भित्रपट्टि गुजमुज्ज परेको पातलो छालाको पत्र वा झिल्ली हुन्छ जसलाई योनिच्छद Hymen भनिन्छ । पहिले–पहिलेको जमानामा योनिमा भएको योनिच्छद यौनसम्पर्क गर्दा च्यातिएर रगत आउनुलाई नै केटीको कौमार्य भंग भए– नभएको आधार बनाइन्थ्यो । यसको प्रमाणका लागि विवाहको पहिलो रात सेतो तन्नामा सुत्नुपर्ने चलन चलाइएको थियो ताकि रगतको दाग स्पष्ट देखियोस् । यद्यपि यो आधारलाई वैज्ञानिक मान्न सकिँदैन । कुनै–कुनै केटीको योनिच्छद जन्मजात नै नहुन सक्छ वा यसको राम्रोसँग विकास नै नभएको हुनसक्छ भने यौनसम्पर्कबाहेकका अन्य क्रियाकलापले पनि यसलाई पहिले नै च्यातिदिएको हुन सक्छ । महिलाहरूमा योनिच्छद च्यातिने जस्ता शारीरिक प्रमाण भएको भनिएको स्थितिमा त अहिले आएर पक्का शारीरिक सम्बन्ध राखे–नराखेको भन्न सकिने स्थिति छैन ।
पुरुषमा त यो कुरा अझ अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने त स्पष्ट नै छ । तैपनि पुरुषको सन्दर्भमा पनि कुमारत्व परीक्षण गर्ने प्रचलन अफ्रिकी आदिवासीमा पाइन्छ । उनीहरूका अनुसार केटामा फनि जथभल जस्तो झिल्ली अग्रचर्ममा हुन्छ । यदि अग्रचर्म सजिलै पछाडि फर्कन्छ भने कुमारत्व नभएको मानिन्छ । अर्को परीक्षणमा केटाको घुँडा कालो छ भने ऊ कुमार नभएको मान्ने प्रचलन पनि छ । जे होस्, यी कुरामा कुनै वैज्ञानिक आधार छैनन् ।
कतिपय सम्प्रदायमा यौनसम्पर्क राखिए पनि परम्परागत रूपमै कौमार्य नवीकरण गर्ने प्रचलन भएको कुरा सुन्न पाइन्छ, तर अहिले कुरा फरक भएका छन् । जो कोही एकपटक यौनसम्पर्कको अनुभव लिइसकेपछि पुनः अनुभवहीनताको स्थितिमा पुग्न सक्दैनन् । बिर्सनुले पनि त्यो स्थितिमा पुगिँदैन । त्यसैले सैद्धान्तिक रूपमा कौमार्यतालाई फर्काउन सकिँदैन, तर अहिले च्यातिसकिएको भए पनि योनिच्छदलाई शल्यक्रिया गरेर फुनर्निर्माण (hymenorrhaphy, हाइमेनोराफी) गरिएको पनि पाइन्छ, जसले योनिच्छदलाई कुमारित्वको आधार मान्ने कुरालाई थप जटिल र अमान्य बनाइदिएको छ ।
केटीको पिसाबको निर्मलता एउटा विधि भए पनि पिसाबको धाराको सन्दर्भमा पनि अनेक घारणा पाइन्छ । अक्षतयोनि केटीको पिसावको धारा बच्चाको जस्तै हुनुपर्ने मानिन्छ । विशेष गरेर केटाको सन्दर्भमा यौनसम्पर्कपश्चात केही वीर्य मूत्रनलीमा रहँदा पिसाबको धारा राम्रोसँग नआई छरिएर आउन सक्छ ।
केटीमा पनि यस्तै केही हुन्छ होला भन्ने सोचले यस्तो अवधारणा आएको हुनसक्छ । यो विषयमा अध्ययन भएको पाइँदैन, तै पनि यसमा कुनै वैज्ञानिक आधार भने छैन । पुरुषमा वीर्य र पिसाब दुवै नै मूत्रनलीबाट बाहिर आउँछन् तर महिलाको योनिभन्दा फरक छुट्टै मूत्रनलीवाट पिसाब आउँछ ।
विचार गर्नुपर्ने कुरा के भने घर परिवार, छर–छिमेक अनि समाजले यस्ता सम्भावित सम्बन्धलाई जहिले पनि नियालिरहेको हुन्छ । आफ्नो कसैसँगको सामिप्यता कसै न कसैले देखेको हुन्छ र यस्ता कुरा सार्वजनिक हुन सक्छन् । कसैले भयादोहन गर्न खोज्यो भने स्थिति कस्तो हुन्छ भनेर पनि विचार गर्नुपर्छ । त्यसैले शारीरिक पक्षमा मात्र ध्यान दिनु बुद्धिमानी हुँदैन ।(श्रोत: साप्ताहिक )